Yesu ne Ɔbaa Bi Wɔ Abura Ho | Nea Mmofra Betumi Asua Afi Bible Mu
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Kabiye Kabuverdianu Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Mixe Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ɔbaa Bi a Ɔwɔ Abura Ho
Bere a Yesu ne n’asuafo no dii Twam Afahyɛ no wiei no, wɔkɔfaa Samaria sɛ wɔresan akɔ Galilea. Yesu gyee n’ahome wɔ baabi a yɛfrɛ hɔ Yakob abura. Ná ɛbɛn kurow bi a yɛfrɛ no Sikar. Bere a Yesu regye n’ahome wɔ hɔ no, n’asuafo no kɔɔ kurom sɛ wɔrekɔtɔ aduan.
Ɔbaa bi baa abura no ho sɛ ɔrebɛsaw nsu. Yesu ka kyerɛɛ ɔbaa no sɛ: “Ma me bi nnom.” Ɔbaa no ka kyerɛɛ Yesu sɛ: ‘Adɛn nti na wo ne me rekasa? Meyɛ Samariani baa. Yudafo ne Samariafo nkasa.’ Yesu ka kyerɛɛ ɔbaa no sɛ: ‘Sɛ wunim me a, anka wubebisa me nsu, na mama wo nkwa nsu.’ Ɔbaa no bisaa Yesu sɛ: ‘Dɛn na worepɛ akyerɛ? Wunni bokiti mpo.’ Yesu kaa sɛ: ‘Obiara a ɔbɛnom nsu a mede bɛma no no, osukɔm renne no bio da.’ Ɛnna ɔbaa no kaa sɛ: “Owura, ma me nsu yi bi.”
Afei Yesu ka kyerɛɛ ɔbaa no sɛ: ‘Kɔfrɛ wo kunu bra abura yi ho.’ Ɔbaa no kaa sɛ: ‘Minni kunu.’ Yesu kaa sɛ: ‘Woaka nokware. Woaware mpɛn nnum. Seesei, ɔbarima a wo ne no te no, ɔnyɛ wo kunu.’ Ɔbaa no kaa sɛ: ‘Mahu sɛ woyɛ odiyifo. Me kuromfo gye di sɛ yebetumi asom Onyankopɔn wɔ bepɔw yi so. Nanso Yudafo deɛ, wɔka sɛ Yerusalem nko ara na yebetumi asom Onyankopɔn. Migye di sɛ sɛ Mesia no ba a, ɔbɛkyerɛ yɛn ɔkwan a ɛsɛ sɛ yɛfa so som Onyankopɔn.’ Afei, Yesu kaa asɛm bi a na ɔnka nkyerɛɛ obiara da. Ɔkaa sɛ: ‘Mene Mesia no.’
Ɔbaa no tuu mmirika kɔɔ ne kurom hɔ kɔka kyerɛɛ Samariafo no sɛ: ‘Ɛyɛ me sɛ mahu Mesia no. Onim me ho nsɛm nyinaa. Mommra mmɛhwɛ!’ Kurow no mufo dii ɔbaa no akyi kɔɔ abura no ho kotiee Yesu nkyerɛkyerɛ.
Samariafo no ka kyerɛɛ Yesu sɛ ɔmmɛtena wɔn kurow no mu. Yesu de nna mmienu kyerɛkyerɛɛ wɔn, na nnipa pii gyee no dii. Kurow no mufo ka kyerɛɛ Samariani baa no sɛ: ‘Bere a yetiee ɔbarima yi asɛm no, yehuu sɛ ɔno ne wiase agyenkwa no ampa.’
“‘Bra!’ Na ma nea osukɔm de no biara mmra; na ma nea ɔpɛ biara mmegye nkwa nsu kwa.”​—Adiyisɛm 22:17
Nsɛmmisa: Adɛn nti na ɛyɛɛ Samariani baa no nwonwa sɛ Yesu ne no kasae? Asɛm bɛn na Yesu ka kyerɛɛ ɔbaa no?